ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရစ်ယာန်ချိန်းတွေ့ | ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်တည်းချိန်းတွေ့ | SGS
Geo တည်နေရာ အေသးစိတ္ရွာရန္ SGS ထောက်ပံ့မှု အခမဲ့ယခုဆက်သွယ်ပါ အကောင့်၀င်ခြင်း
ငါက လူသား မိန်းမ
ရှာရန် လူသား မိန်းမ
အသက်အရွယ်: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
မှ: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
နိုင်ငံ: နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပါအာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားAshmore နှင့် Cartier ကျွန်းၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘရာဇီးBritish Virgin Islandsဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoမြန်မာနိုင်ငံဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းClipperton ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂို, အဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကွန်ဂို, အသမ္မတနိုင်ငံကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာအိုင်ဗရီကို့စ်Кот.ရိယာခရိုအေးရှားကျူးဘားဆိုက်ပရပ်စ်Czeck သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဥရောပကျွန်းဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး)ဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်အန္တာတိတ်မြေgabonဂမ်ဘီယာ, အဆိုပါဂါဇာကမ်းမြှောင်Georgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်Glorioso ကျွန်းများဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများသန့်ရှင်းသောဘုရား See (ဗာတီကန်စီးတီး)ဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်Howland ကျွန်းဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းဣသရလေအီတလီဂျမေကာဇန်နဝါရီ Mayenဂျပန်Jarvis ကျွန်းဂျာစီJohnston Atollယော်ဒန်မြစ်Juan က de Nova ကျွန်းကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကိုရီးယား, မြောက်ကိုရီးယား, တောင်ကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယား၏ယခင်ယူဂိုဆလားဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာက Man, ကျွန်းမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesia ၏ပဒေသရာဇ်စတိတ်တစ်ဝက်တစ်ပျက်ကျွန်းများမော်လ်ဒိုဗာမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်နမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယ်သာလန်အန်တီနယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcaim ကျွန်းများပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းRomainiaရုရှားနိုင်ငံရဝမ်ဒါစိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျစကော့တလန်senegalseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစုစပိန်Spratly ကျွန်းစုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbardဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံတိုဘာဂိုTogaအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်တူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်Tuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းဥရုဂွေးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥဇဘက်ဗာနူအာဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islandsဝေလနယ်Wallis နှင့် Futuna-အနောက်ဘက်ကမ်းအနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ယူဂိုဆလားဗီးယားဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
သင့်ကိုရှာဖွေရန်ခြေလှမ်းများ ဝိညာဉျသ Mate
သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်ယုံကြည်သောအရာ၊ ပျော်စရာအတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်သူငယ်ချင်းနှင့်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်တွင်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုကိုအသုံးပြုပါ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရှာဖွေရန်သင်၏ယုံကြည်ခြင်း၊ တန်ဖိုးများနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုများကိုမျှဝေသူကိုရှာဖွေပါ။
ရှာဖွေခြင်းမှသင်တွေ့ရှိခဲ့သူများကိုဆက်သွယ်ပါ၊ သူတို့ယုံကြည်သောအရာ၊ မည်သူ့ကိုမျှတောင့်တ။ မိတ်ဆွေသို့မဟုတ် Romance ကိုရှာလိုသူများအားသိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသောတစ်ကိုယ်ရေခရစ်ယာန်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိယုံကြည်ခြင်းအခြေခံသောဆက်ဆံရေးများ၌အတူတကွပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်သည်။ စုံတွဲများအတွက်အင်တာနက်စွမ်းအားနှင့်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ခြင်းစိတ်ကူးကို အသုံးပြု၍ Sovereign Grace Singles ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
SGS [အချုပ်အခြာအာဏာကျေးဇူးတော်ရှိသည့်တစ်ကိုယ်ရေသမားများ] သည်ဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာဖြစ်သော Solas 5၊ TULIP၊ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏အယူဝါဒဤနည်းဖြင့် Calvinists အတွက်အကောင်းဆုံးပြုပြင်ထားသောခရစ်ယာန်ချိန်းတွေ့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Dean Scott သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိယုံကြည်မှုအခြေခံသောဆက်ဆံရေးများ၌ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသောတစ်ကိုယ်ရေခရစ်ယာန်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားအတူတကွပူးပေါင်းရန်ဟူသောသူ၏ရည်မှန်းချက်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စုံတွဲများအတွက်အင်တာနက်စွမ်းအားနှင့်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ခြင်းစိတ်ကူးကို အသုံးပြု၍ Sovereign Grace Singles ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
နှစ်အနည်းငယ်အကြာ၌ဒင်းသည် SGS တွင်သူချစ်သောဇနီးကရင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ကြသည်။ Sovereign Grace Singles ရှိဝန်ထမ်းများအားလုံးသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်အမှုဆောင်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောယုံကြည်သူများဖြစ်သည်။ ဓမ္မဆရာများနှင့်ခေါင်းဆောင်များကကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့်သူ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွက်တစ်ကိုယ်ရေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားအတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ်ယာန်ချိန်းတွေ့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အားပေးမှုနှင့်သတိပေးမှုများကိုပေးသည့်ဘုရားသခင်၏ပြင်ဆင်ပေးမှုအကြောင်းသင်နှင့်အခြားသူများအားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိုပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မတ်လမှာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဂျက်ဆင်လူပျိုတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။
Andrej & Anu ရဲ့ဇာတ်လမ်း။ SGS ၏ပထမ ဦး ဆုံးမင်္ဂလာဆောင် - 2005!
ငါ့နာမည် Anu Gopalan, ဒါပေမယ့်ငါ Grace အားဖြင့် website တွင်သွား။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်ဘုရားသခင်သည် SGS ကိုမည်သို့အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသင်သိစေချင်ပါသည်။ ငါဟာအိန္ဒိယယောက်ျားတွေကိုသာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင် SGS ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ကလေးခြောက်ယောက်အနက်လေးယောက်သည် Sovereign Grace Singles မှတစ်ဆင့်ခရစ်ယာန်ကြင်ဖော်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် !!
ကျွန်တော့်ကလေးခြောက်ယောက်ထဲကလေးယောက်ဟာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဂိတ်တစ်ကိုယ်တော်ကနေတဆင့်ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်ဖက်တွေတွေ့ခဲ့တယ်။ ” နှင့်အတူ…“ Ashk, Muskogee of Sovereign Grace Church of Pastor, OK ။ စစ်မှန်တဲ့ပိုးပန်းမှုမှာသင့်တော်တဲ့ကြီးကြပ်မှုအပြင်ဒီဟာကလူတွေကိုခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့ခြင်းစနစ်အတွက်သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ။ ~ ယောဟနျသ Ashwood, သင်းအုပ်ဆရာ of
Reformed Singles များအတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု - Christian Renewal Magazine မှ John Van Dyke
Reformed Si အတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု…
တိနှင့် Carrie ၏ပုံပြင်!
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်က Sovereign Grace Singles အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သာ…
နှစ်ပေါင်း ၁၄၁ နှစ်၏ပေါင်းစည်းသည့်ခေတ်ကာလကြီးတစ်ခု။
မိုင် ၂၀၀၀ ကျော်ဝေး။ အသက် ၁၄၁ နှစ်နှင့်အတူနေထိုင်သောလူနှစ် ဦး သည်အိမ်ထောင်အသစ်တစ်ခုတွင်ပျော်ရွှင်မှုရနိုင်ပါသလား။ …
SGS သက်သေခံချက်: Ric နှင့် Giselle
ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း Dean, SGS ၏ပိုင်ရှင်, site ကိုများအတွက်ထောက်ခံချက်ရေးသားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်! SGS ကကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်အတွက်တကယ့်ကောင်းချီးတစ်ခုပါပဲ
Ric နှင့် Giselle
SGS တွင်“ အဖွဲ့ဝင်သစ်” အဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းဘော့ဘီနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ခဲ့သည်။ သူ့ပရိုဖိုင်းကိုဖတ်ပြီးနောက် ..
အချုပ်အခြာအာဏာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း single ၏ Ladies!
Calvinist ခရစ်ယာန်များ single
© 2005 - 2021 အချစ်
ဘယ်လိုအစီရင်ခံစာမျိုးလဲ။ အထင်အမြင်လွဲစေခြင်းသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှု ပုံ / ဗလာကိုယ်ရေးအကျဉ်းမရှိပါ ထိုးစစ်ဆင်သော Spam များကို အကြမ်းဖက်သို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်း